DEG-DEG: Chelsea Oo Si Dhab U Doonaysa In Ay Badalka Diego Costa Ka Dhigato Gool Dhaliyiyaha Man City Ee Sergio Aguero - Laacib.net
DEG-DEG: Chelsea Oo Si Dhab U Doonaysa In Ay Badalka Diego Costa Ka Dhigato Gool Dhaliyiyaha Man City Ee Sergio Aguero
Kooxda Chelsea ayaa si dhab ah u doonaysa in ay badalka Diego Costa ka dhigato gool dhaliyaha Manchester City ee Sergio Aguero. Waxaanu shalay idiin soo gudbinay war cusub oo uu shaaca ka qaaday kooxda Chelsea ay doonayso sidii ay Sergio Aguero ugala soo wareegi lahayd Manchester City iyada oo warkan uu cadeeyay wariyaha ree Spain ee Manu Sainz kaas oo sheegay in Guardiola uu haddaba ogolaaday in xidiga ree Argentina uu Blues ku biiro.
Sky Sports ayaa hadda xaqiijiyay in Chelsea ay si dhab ah u xiisaynayso in ay Sergio Aguero ka dhigato badalka tooska ah ee Diego Costa kaas oo ay si rasmi ah uga dhamaaday in u dib ugu soo laabto Chelsea. Sergio Aguero ayaa xidhan kara maaliyada Blues haddii ay labada kooxood heshiis ka gaadhaan.
Wariyaha ree Spain ee Manu Sainz oo dad hortii warkan jabiyay ayaa 23 saacaadood ka hor waxa uu bartiisa twitterka uu ku xaqiijiyay: “Iyagu waxay ii sheegeen in Chelsea ay doonayso Kun Aguero, Guardiola haddaba Ok-da ayuu siiyay hawl galkan”.
Kadib markii uu Antonio Conte kooxda Blues uu ka saaray Diego Costa ayuu bartilmaameedka kowaad ka dhigtay Romelu Lukaku balse Manchester United ayaa xidiga ree Belgium kula wareegtay 75 milyan oo gini laakiin markale Chelsea ayaa waayaysa saxixia Alvaro Morata kaas oo qarka u saaran in uu AC Milan 70 milyan oo euros ugu biiro.
Laakiin maamulka Blues ayaa hadda muhiimada kowaad siinaya in ay Sergio Aguero keenaan Stamford Bridge balse sida uu Sky Sports sheegay waxa uu noqon doonaa mid aad ugu adag Chelsea haddii ayna Manchester City doonayn in ay iska iibiso Aguero.
Markii Khaldoon Al Mubarak wax laga waydiiyay haddii uu Aguero xili ciyaareedka cusub uu kooxdiisa baaqi ku sii ahaan doono ayuu ku jawaabay:”Xaqiiqdii taasi marnaba shaki kamuu jirin, waxaan akhriyay warar badan oo xan ah, Sergio Aguero waa mid ka mid ah ciyaartoyda aduunka ugu fiican”.
Laakiin iyada oo Pep Guardiola uu kursiga kaydka in badan ku hayay Aguero xili ciyaareedkii soo dhamaaday kadib markii uu helay Gabriel Jusus ayay wararku sheegayaan in uu macalinka ree Spain ogolaaday in Cheslea ay la wareegi karto Kun Aguero. Wixii warar ah ee xaalada Aguero iyo Chelsea ka soo kordha, Insha Allah wararkeena danbe ayaad kula socon doontaan.